सावधान : के तपाईको नङ टोक्ने बानी छ ? नङ टोक्ने मानिसलाई लाग्न सक्छ ‘पारोनाइसिया’ नामक खतरा रोग ! ज्ञान बाढ्नुनै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो त्यसैले १ सेयर गर्नुहोला
मानिसको प्राय सबैको एउटा एउटा बानि हुन्छ । कतिपय मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ । बालबालिकामा यस्तो बानी देखिनु सामान्य हो । तर, युवायुवती या पाका उमेरका मानिसको नङ टोक्ने बानी खराब हो । नङ टोक्ने बानीले विभिन्न प्रकारका संक्रमण फैलिने डर हुन्छ ।शरीरका विभिन्न अंगजस्तै नङ पनि फोहर र संक्रमण बोक्ने प्रमुख अंग हो । नङ टोक्दा निम्त्याउँन सक्ने समस्याहरुःरक्तस्राबः नङ टोक्दा नङ नजिकैको छाला बारम्बार उक्किरहन्छ। जसले गर्दा रक्तस्राब हुनुका साथै अत्यन्त दुखाइ पनि हुन्छ ।
गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्दा महिलालाई देखिन्छ यस्ता साइडइफेक्ट
तनाव हुनुहुन्छ ? खानुस् भेडे खुर्सानी
काठमाडौँ । खुर्सानी भन्नेबित्तिकै हामीमध्ये कतिपयलाई त्यसको पिरो स्वादले तर्साउँछ त कतिलाई पिरो स्वादले नजिक तान्छ पनि । तर, खुर्सानी पिरो मात्र नभई तरकारी खान समेत सकिने खालको पनि हुन्छ र हामीले पनि प्रयोग गर्ने गरेका छौ ।
हामीले प्राय भेडे खुर्सानी भनेर चिन्ने खुर्सानी पिरो हुँदैन र यसको तरकारी खाने गरिन्छ । यो खुर्सानी खानुको पनि निकै धेरै फाइदा छन् । यो खुर्सानीमा धेरै नै औषधिय गुण हुन्छ ।
यसका केही फाइदाहरूका बारेमा थाहा पाऔ :
– यो खुर्सानीको प्रयोगले तपाईको शरिरमा रहेको कोलस्टेरोलको मात्रा कमी गर्छ ।
– खुर्सानीमा हुने एक रसायन लायकोपिनले शारीरिक तनाव तथा डिप्रेशनलाई कम गर्नका लागी मद्धत गर्छ ।
– यसले शारीरिक शक्तिलाई बढाउने गर्छ । यसमा पाइने भिटामिन ए, बि र सी ले शरिरको मजबुतिका लागी काम मद्धत गर्छन् ।
– खुर्सानीको प्रयोगले शरिरको कम्मरको दुखाई, साइटिका, जोर्नीको दुखाईमा समेत राहत दिन्छ । खुर्सानीमा पाइने क्याप्साइसिन नामको रसायनले दुखाई कम गर्ने काम गर्छ ।
– यो खुर्सानीले शरिरको तौल घटाउनका लागी समेत मद्धत गर्छ । शरिरको बोसो तथा कार्बोहाइड्रेडलाई कम गर्नका लागी पनि यसले निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
– उच्च रक्तचापमा समेत यो खुर्सानी लाभदायक हुन्छ । खानामा यसको अधिक प्रयोगले उच्च रक्तचाप कम गर्न मद्धत गर्छ ।
काठमाडौँ । नेपाली समाजमा बिरामी नभई स्वास्थ्य जाच नगर्ने प्रचलन छ तर हिजोआज जनमानसमा स्वास्थ्यप्रतिको सजगता बढ्दै गएको छ। समय-समयमा आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने चलन सुरु भएको छ। आमनागरिकको यही सचेतना बुझेर स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूतिर आकर्षित गर्न स्वास्थ्य परीक्षणका विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गर्छन्। तिनै मध्येको चर्चित प्याकेज हो, ‘होलबडी चेकअप’ अर्थात शारीरिक परीक्षण। होलबडी चेकअपबारे धेरैले सुनेका त हुन्छन्, तर, त्यसभित्र के-के जाँच गरिन्छ, के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेबारे चाहिँ उति धेरै जानकारी राखेको पाइँदैन।
दुई हजारमा रगतको परीक्षण गरिने र मुटु किड्नीको पनि सामान्य चेकजाँच हुने गर्छ। १७ हजारको प्याकेजमा प्रत्येक अंगहरुको भित्री परीक्षण गरी विस्तृत जानकारी पाइने अस्पतालले जनाएको छ। – शिखरन्युजबाट
एजेन्सी । शरीरको माथिल्लो सतह हात, पाखुरा, पिँडुला लगायतको अंगमा माकुराको जालो वा रुखको हाँगा जस्तो खुम्चिएर बसेको नशालाई फुलेको नशा भनिन्छ । मेडिकल भाषामा यसलाई ‘डिसएप्पियर भेरीकोस भेन्स ‘ भनिन्छ ।
यस्तो नशा फुलिएको हामीले सजिलै देख्न सक्छौं । छालामा हल्का रातो तथा निलो रंगजस्तो देखिने गर्दछ । विशेषगरी पाखुरा र पिँडुलामा यस्तो समस्या बढि देखिने गर्दछ । यस्तो समस्या हामी आफैले देख्न सक्छौं । यस्तो समस्या ५० वर्ष उमेर कटेपछि धेरै मानिसहरुलाई हुने गर्दछ ।
झट्ट हेर्दा सामान्यजस्तो लागेपनि यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । चिकित्सकहरुका अनुसार नशाको भल्भ (नलीको द्वार) खराब भएपछि यस्तो समस्या देखिने गर्दछ । नशामा अत्याधिक रक्त सञ्चारको दबाब अर्थात उच्च रक्तचाप हुनेहरुलाई यो समस्या झन् खतरनाक हुन सक्छ ।
यस्तो समस्याको उपचार गर्न अस्पतालमा ज्यादै महगों पर्ने भएकोले सबैले उपचार गर्न सक्दैनन् । तर आयुर्वेदिक चिकित्सकहरुले भने यस्तो समस्या भएमा घरमै सजिलै उपचार गर्न सकिने बताएका छन् ।
कसरी गर्ने त घरेलु आयुर्वेदिक उपचार ?
सर्वप्रथम औषधि बनाउन आवश्यक पर्ने आधा कप घिउकुमारी (एलोभेरा), स्याउबाट बनेको अमिलो (एप्पल साइडर भिनेगर) र आधा गाँजर ठिक पार्नुहोस् । अब गाँजरलाई मसिनो गरी काटेर घिउकुमारीसँग मिसाई पिंधेर लेदो (पेष्ट) बनाउनुहोस् ।
त्यसपछि गाँजर र घिउकुमारीको लेदोमा स्याउबाट बनेको अमिलो (एप्पल साइडर भिनेगर) मिसाएर एउटा सुरक्षित भाँडोमा राख्नुहोस् । यसरी तयार भएको मल्हम फुलेको नशा वरीपरी राम्ररी लगाउनुहास् त्यसको ठीक आधा घण्टा पछाडि चिसो पानीले धुनुहोस् ।
यसरी आयुर्वेदिक औषधि निरन्तर एवं महिना लगाउनुहोस् तपाँइको फुलेको नशा विस्तारै हराउने छ । तर तपाइको उमेर अनुसार लगाउनु पर्ने समय केहि घटबढ हुन सक्छ । – हाम्रो डाक्टरबाट
राजतन्त्र फर्कने सपना नदेखे हुन्छ ः प्रधानमन्त्री
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा हुने राष्ट्रपतिको विश्वास